Madaxweyne Deni oo Xarigga Ka Jaray Warshadda Tuubooyinka iyo Siligga (Sawirro) – Radio Daljir
Madaxweyne Deni oo Xarigga Ka Jaray Warshadda Tuubooyinka iyo Siligga (Sawirro)
Luulyo 30, 2019 3:20 g 0
Madaxweynaha Dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xarigga ka maray warshad cusub oo soo saari doonta tuubooyinka iyo siligga, taas oo markii ugu horaysay laga hirgaliyey deegaanada Puntland.
Madaxweyne Deni oo musabadda hadal kooban ka jeediyey ayaa bogaadiyey ganacsatada maalgashiga ku samaynaysa dalka, gaar ahaan masuuliyiinta iska kaashaday shirkadaan soo kordhisay samaynta tuubooyinka iyo siligga oo dalka siweyn looga isticmaalo.
“Marka u horaysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii maalgalinta ku sameeyey warshadaan maanta halkaan lagu daahfuray oo aan rajaynaayo in ay wax badan qayb ka noqondoonto horumarka dalka ka socda”.
“Waxaa bisha ogos la daahfuri doonaa qorshaha shanta Sano ee soo socota waxaana rajaynayaa in qeybaha kala duwan ee ganacsatadu in ay ku yeeshaan talo badan “xagge dalku u socon karaa dhinaciisa hormarku”. Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland